Hanti-dhowraha guud oo joojiyey Iibinta iyo bixinta Dhulka Dawladda iyo Adeegyo kale
Siciid Saleeban Mirre Hanti-dhowraha guud ee Qaranka
Hanti-dhowraha guud ee Qaranka Siciid Saleeban Mirre oo Warbaahinta la hadlay ayaa madnuucay gabi ahaanba bixinta iyo Iibka dhulka danta guud ah iyo adeegyada kale oo ay dawladdu ku bixiso lacag la’aan.
Waxa kamid ah bixinta biyaha ay Wakaaladdaha Biyuhu siiyaan dadweynaha oo wixii lacag la’aan ah uu joojiyey.
Hore wuxuu Hanti-dhowruhu u madnuucay in wax lacag ah lagala baxo Buug-xiisaabeedyada Hay’addaha dawladda uga furan Bangiyada gaarka loo leeyahay iyo ka dawladda.
Dhamaan go’aamadiisa waxa uu ku saleeyey xilliga kala-guurka Xukuumiga ah ee lagu jiro, iyadoo qaraarkan u dambeeya ee uu soosaaray sharci darro ka dhigayo wixii Hanti dan-guud ah la bixiyey 13 Bishii November wixii ka dambeeyey.
Go’aanka ka soo baxay madaxa Xafiiska Hanti-dhowraha guud ee Qaranka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii dambeysay ka hadal hayey inay madaxda Wasaaradaha dawladda qaarkood bixiyeen Hanti ma guurto ah, waxaana kamid ah Wasiirka Howlaha guud oo la sheegay inuu bixiyey Dhisme dawladdu leedahay oo ku yaalla Agagaarka Maxkamadda Gobolka.
Dhismahaas oo u kiraysnaa Hay’adda WFP, lama hayo wax dhikumanti ah oo caddeynaya bixintiisa, hase ahaatee dad xogogaal ah ayaa GNA u sheegay in la siiyey Shirkad Ganacsi oo maxali ah.
Previous: Eng. Faysal: “Doorasho Qabyaalad ah ayaa dalka ka dhacday”
Next: Sarifleyaasha Somaliland oo ka dalbaday Madaxweynaha la doortay kullan deg deg ah